किम जङ उनको लेदरको ज्याकेटको चर्चा विश्वभर, आखिर कारण के होला? जानौं – Eps Sathi
किम जङ उनको लेदरको ज्याकेटको चर्चा विश्वभर, आखिर कारण के होला? जानौं
December 4, 2021 730
एजेन्सी, प्योङयाङ : उत्तर कोरियाले सर्वसाधारणलाई लेदरको कोट लगाउन प्र’तिब’न्ध लगाएको छ। उत्तर कोरियाका ता’नाशा’ह किम जोङ उनको मुख्य रोजाइ रहेकोले सर्वसाधारणलाई कोट लगाउन प्र’ति’बन्ध लगाइएको हो। उन सबैभन्दा पहिला सन् २०१९ मा लेदर कोटमा देखिएका थिए। त्यसपछि सो कोट यति प्रख्यात भयो की उनको अनुशरण गर्दै त्यहाँका कुलीन वर्गले सो कोट लगाउन थाले।
चिसो मौसम सुरू भएसँगै लामो लेदर कोट फेसन जस्तै भएको छ। तर, पछिल्ला समयमा प्र’ह’रीले कोट बिक्रीमा प्र’तिब’न्ध लगाएको छ। पसलेलाई कोट बिक्री नगर्न र अटेरी गरे ज’फत गर्न सरकारले प्र’ह’रीलाई निर्देशन दिएको छ। ‘उच्च मर्यादित व्यक्ति जस्तो देखिन लुगा लगाउनु भनेको व्यक्तिलाई चुनौती दिनु पनि हो,’ एक प्र’ह’री अधिकारीको भनाई उदृत गर्दै एक अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले लेखेको छ।
विशेष लुगा कसले लगाउने भन्ने विषय पार्टीको अधिकार भएकोले सर्वसाधारणलाई छालाको कोट नलगाउन उर्दी जारी गरिएको ती अधिकारीले बताए। यसै साता चीनसँगको सीमा खुला गरिएपछि सेप्टेम्बरमा कोरियाली बजारमा किमले लगाउने जस्तै कोट देखिएका थिए। केही व्यापारीहरुले चीनबाट कच्चा पर्दाथ आयात गरेर स्वदेशमै कोट सिलाएका थिए।
सन् २०१९ मा अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको भेट वार्तामा किम लेदर कोटमा सजिएका थिए। किमका बुबा र हजुरबुबा माओ शैलीको ज्याकेट र कालो चस्माका सोखिन थिए। चिसो मौसम सुरू भएसँगै लामो लेदर कोट फेसन जस्तै भएको बेला पछिल्ला समयमा त्यहाँको प्र’ह’रीले कोट बिक्रीमा प्र’तिब’न्ध लगाएको छ। पसलेलाई कोट बिक्री नगर्न र अटेरी गरे जफत गर्न सरकारले प्र’ह’रीलाई नि’र्देशन दिएको अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यमहरुले जनाएको छ।
विशेष लुगा कसले लगाउने भन्ने विषय पार्टीको अधिकार भएकोले सर्वसाधारणलाई छालाको कोट नलगाउन उर्दी जारी गरिएको बताईएको छ। ‘उच्च मर्यादित व्यक्ति जस्तो देखिन लुगा लगाउनु भनेको व्यक्तिलाई चु’नौती दिनु पनि हो,’ एक प्र’ह’री अधिकारीको भनाई उदृत गर्दै एक अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेको छ।
Prevकोरोना बढेसँगै कोरियाले यस्ता नियमहरु लागू गर्दै, कोरियामा भएका नेपालीहरुले समेत बुझ्नैपर्ने
Nextजापानले ट्रेनभित्र अनिवार्य सिसि क्यामेरा जडान गर्नुपर्ने नियम लागू गर्दै
खेल्ने क्रममा नजिकैको खोल्सामा केटाकेटिले बोराभित्र ५ करोड भे’ट्टाएपछि,,,